बजेटमा भनेअनुसार नयाँ ल्यापटप किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यी विषयहरुमा ध्यान दिनुहोस् - Technology Khabar
» बजेटमा भनेअनुसार नयाँ ल्यापटप किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यी विषयहरुमा ध्यान दिनुहोस्
बजेटमा भनेअनुसार नयाँ ल्यापटप किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यी विषयहरुमा ध्यान दिनुहोस्
हालै सरकारले बजेटमार्फत देशभरका सरकारी र सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई ल्यापटप किन्नका लागि सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
कोरोना महामारीको कारण, देशभर स्कूल कलेज बन्द रहेको र अनलाइन कक्षाको बढ्दो प्रयोगका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।७९ का लागि सो योजना ल्याएको हो । जसअनुसार ८० हजार रुपैयाँसम्मको ल्यापटप सहुलियत ऋणमा पाईनेछ।
यस बाहेक देशमा हजारौं मानिसहरु घरबाट काम गरिरहेका छन अर्थात् वर्क फ्रम होममा सहभागी छन् । यस्तो अवस्थामा, ल्यापटप तिनीहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्याजेट भएको छ।
बजारमा यसको माग लगातार बढिरहेको छ । ल्यापटप निर्माता कम्पनीहरूले बजारमा उत्कृष्ट सुविधाहरूको साथ गत केही महिनामा नयाँ ल्यापटपहरू पनि लन्च गरिरहेका छन्। यदि तपाईं पनि नयाँ ल्यापटप किन्न योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले केहि महत्त्वपूर्ण चीजहरू जान्नुपर्दछ। यदि तपाईं यी विषयहरू ध्यानमा राख्नुहुन्छ भने, तब तपाईँले न्यून मूल्यमा नै उत्तम उत्पादन खरीद गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्
१। सर्वप्रथम तपाईंको बजेट अर्थात कति मूल्य तिर्ने निर्णय गर्नुहोस् र त्यो बजेट कोटीमा सबै कम्पनीहरूको ल्यापटपको सुविधाहरू तुलना गर्नुहोस्। राम्रो र पछिल्ला फिचरहरू भएका ब्राण्ड वा कम्पनीका ल्यापटप मात्र खरीद गर्नुहोस्।
२। प्रोसेसर कुनै पनि कम्प्युटर वा ल्यापटपको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश हो। यदि तपाइँको कम्प्युटरमा पछिल्लो समय आएको र शक्तिशाली प्रोसेसर छ भने तब तपाइँको ल्यापटपको गति धेरै राम्रो हुनेछ र यसको कार्यक्षमता पनि ससक्त हुनेछ।
३। ल्यापटपमा र्याम र स्टोरेज एक धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। धेरै र्यामको भएको ल्यापटपको कार्य प्रदर्शन राम्रो हुनेछ। यस बाहेक, तपाई डाटा भण्डारण गर्न थप स्टोरेज प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
४। बजारमा धेरै स्क्रीन साइज र आकारका ल्यापटपहरू उपलब्ध छन्, जसमध्ये तपाई आफ्नो सुविधा अनुसार कुनै एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ । सामान्यतया, १४ इन्चको स्क्रीन भएको ल्यापटप सबैभन्दा बढी रुचाईन्छ।
५। ल्यापटप खरीद गर्दा यसको ब्याट्रीको विशेष ख्याल राख्नुहोस् । यदि ल्यापटपको ब्याट्री ठूलो क्षमताको र शक्तिशाली छ भने तपाईं यसलाई एक पटक पूर्ण चार्जपछि धेरै घण्टासम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
६। बिक्रीपछिको सुबिधा र वारेन्टीमा पनि ध्यान दिनुहोस् । तपाईँले किनेको ल्यापटपमा यदि कुनै समस्याहरु देखापरेको खण्डमा त्यसमा हुने वारेन्टी कस्तो र कति समयको छ तथा मर्मतका लागि कस्तो सुबिधा छ भन्ने जानकारी लिनुहोस् ।
युट्यूब भिडियो हेर्दा माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजर क्र्यास हुने समस्या समाधान
नेपाली पात्रो एपमा अब मौसम विवरण, कुण्डली र रेडियो सेवा सुरु